Ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny tokantrano: tanora 15 mianadahy nahazo fiofanana | NewsMada
Ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny tokantrano: tanora 15 mianadahy nahazo fiofanana
Anisan’ny raharaha saro-bahana kanefa mahazo vahana tato ho ato ny herisetra mianjady ao an-tokantrano mihatra amin’ny vehivavy sy ny ankizy na mety hihatra amin’ny lehilahy ihany koa. Ho an’ny taona 2018, nahatratra 230 ny olona niharan’ny hetraketraka tao an-tonkatrano tonga teny amin’ny ivontoerana fihenoana sy fanoroan-kevitra teto Toamasina Renivohitra ka ny 170 tamin’ ireo dia lehilahy avokoa.
Na izany aza, tsy vitsy ireo renim-pianakaviana misedra olana vokatry ny herisetra ara-batana ataon’ny lehilahy ary mitondra takaitra sy ratra mihitsy. Misy tonga eny anivon’ny fitsarana izy ireny kanefa mbola misy ihany tsy mahita rariny eo anivon’ny fitsarana noho ny herin’ny vola avy amin’ny an-daniny.
Vokany, tanora miisa 15 mianadahy mpianatra lalàna no nampiofanina, nandritra ny telo andro ho fanamafisana traikefa isahana ireo ivontoerana handray izany tokantrano na mpivady ary ny ankizy iharan’ny herisetra izany.
Nohamafisin-dRamatoa, mpitsara, Via Celine Yollande, izay avy amin’ny feredasiona misahana ny fampiroboroboana ny vehivavy sy ny ankizy (FPFE) fa tsy mitsara ny raharahana hetraketraka ny ivontoerena fa mandamina sy mampihavana ny tokantrano isehoan’ny olana ary manome toromarika momba izany. Raha misy kosa ny faharatràna eo amin’ny an-daniny ka tsy misy ny fifandeferana dia manampy amin’ny fikarakarana ny niharam-boina amin’ny fakana taratasy manamarina ny fahavoazany any amin’ny dokotera sy manampy azy amin’ny fitarainana ataony ny ivontoerana.
Misy, araka izany, ny fandraisana an-tanana ataon’ny ivontoerana an’ireo izay iharan’ny herisetra karakarain’ny FPFE Toamasina, Foulpointe, brickaville ary Vatomandry. Nohamafisin’ny tompon’andraikitra hatrany fa efa misy fiaraha-miasa amin’ny sampan-draharaham-panjakana maro eto an-toerana ny FPFE ary miara-miasa ihany koa amin’ny mpamatsy vola madinika mba hanamora ny fandraisana an-tanana. Tanjona ny hisian’ny fianakaviana sy tokantrano milamina ary zanaka tomady sy finaritra.